I-Russia ye-United Aviation Corporation ihambisa i-33 Sukhoi Superjet 100 yenqwelomoya kwi2021
Ikhaya » Iindaba zeAnga » I-Russia ye-United Aviation Corporation ihambisa i-33 Sukhoi Superjet 100 yenqwelomoya kwi2021
Ngaphezulu kwe-30 Sukhoi Superjet Iinqwelomoya ezi-100 zabakhweli ezizokujoyina iinqwelomoya zaseRussia ngo-2021.
Malunga neenqwelo moya ezingama-200 ze-SSJ100 sele zibhabha
Izicwangciso ze-2021 zibandakanya ukuhanjiswa kweenqwelomoya ezingama-33 Superjet kwiinqwelomoya zaseRussia
Inxalenye enkulu yokusiwa iya kuhambo lwenqwelo moya eAurora
USekela Nkulumbuso u-Yuri Borisov ubhengeze ukuba i-Russia Umbutho weZizwe eziManyeneyo (UAC) Izicwangciso zokuhambisa ngaphezulu kwe-30 SSJ100 (Sukhoi Superjet 100) yenqwelomoya yabakhweli ukuphela kuka-2021.
"Zimalunga nama-200 iinqwelomoya zolu phawu esele zibhabha kwaye izicwangciso zalo nyaka zibandakanya ukuhanjiswa kweenqwelomoya ezingama-33 kwiSuperjet kwiinqwelomoya zethu," utshilo uSekela Nkulumbuso.
Igosa longeze ukuba uninzi lwezinto ezithunyelwayo ziya eAurora, inqwelo moya yenqwelomoya yaseRussia ekuMazantsi e-Yuzhno-Sakhalinsk, kwingingqi yeSakhalin.
I-Sukhoi Superjet 100 okanye i-SSJ100 yinqwelo yenqanawa eyilwe yinkampani yeenqwelomoya yaseRussia i-Sukhoi Civil Aircraft, icandelo le-United Aircraft Corporation (ngoku: I-Aircraft yeNqila-iSebe le-Irkut Corporation).
Ngophuhliso oluqala ngo-2000, yenza ukuba ibhabhe layo lentombazana nge-19 Meyi 2008 kunye nenqwelomoya yayo yokuqala yorhwebo nge-21 ka-Epreli 2011 neArmavia.
Itoni engama-46–49 (101,000-108,000 lb) yenqwelomoya ye-MTOW ihlala izihlalo ezingama-87 ukuya kwezingama-98 kwaye ixhotyiswa ngee-77-79 kN (17,000-18,000 lbf) ze-PowerJet SaM146 turbofans eziphuhliswe lishishini elidityanelweyo phakathi kweFrench Safran kunye neRussia NPO Saturn.
Ngo-Meyi u-2018, i-127 yayisenkonzweni kwaye ngo-Septemba izithuthi zazingenise iinqwelomoya ze-300,000 kunye neeyure ezingama-460,000. Inqwelomoya ibhale iingozi ezintathu zokuphulukana nomzimba kunye nokufa kwabantu abangama-86 ukusukela ngoMeyi 2019.
IRashiya iza kuphehlelela 'inkqubo yokhenketho lokugonya' kubatyeleli bangaphandle